Faah faahin:- Qarax qasaare geystay oo gelinkii dambe maanta ka dhacay magaalada B/xaawo ee gobolka Gedo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax qasaare geystay oo gelinkii dambe maanta ka dhacay magaalada B/xaawo ee gobolka Gedo
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax aad u xoogan islamarkaana geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada B/xaawo ee gobolka Gedo.
Qaraxaasi oo sida la sheegay ahaa miino lagu weeraray goob maqaaxi ah oo ku taala magaalada B/xaawo ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dad shacab ah oo xilligaasi halkaas ku sugnaa.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku geeriyootay 2 qof oo mid ka mid ah yahay cunug yar, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay 5 kale oo sida la sheegay isugu jira dad shacab ah iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Qaraxa kadib, ciidamada dowladda oo ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa dhowr rasaas riday, iyadoona la sheegayo in rasaastaasi ay geysatay qasaare balse aan la ogeyn inta uu qasaarahaasi la eg-yahay.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda qaraxaas oo maanta ka dhacay magaalada B/xaawo ee gobolka Gedo, waxaana magaaladaasi haatan ka jirta xiisad kacsanaan oo u dhaxeeysa maleeshiyaad iska soo horjeeda oo halkaasi kuwada sugan.
Dhinaca kale, warar madax-banaan aan la xaqiijin ayaa sheegaya in isla goobta uu qaraxu ka dhacay lagu toogtay mid ka mid ah ilaalada wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland, kaas oo sida la sheegay ka mid ahaa ciidankii qaraxa kadib goobtaasi soo gaaray.
Si kastaba ha ahaatee, mudooyinkii ugu dambeysay waxaa magaalada B/xaawo ee gobolka Gedo ka dhacaayay qaraxyo inta badan lala beegsanayay goobaha ay bulshadu isugu timaado, sida maqaayadaha ay dadku wax ka cunaan, iyadoona ilaa iyo haatan uu maamulka halkaasi arrinkaas waxba ka qaban.